Amerikana Iray Mpitety Tany Mampiseho Ireo Sary Taloha Tamin’ny Taompolo 1970 Misy An’i Hiroshima sy i Japana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Janoary 2017 15:05 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, 繁體中文, বাংলা, English
Fanorenam-ponenana tsy ara-dalàna, na fari-bohitra maloto, miorina manaraka ny Tetezana Aioi avy ao avaratr'ilay antsoina hoe “Lohalambon'ny Baomba Atomika” ao Hiroshima, nanodidina ny taona 1972. Sary avy amin'i Larry Rosensweig. Nahazoana alalana.
Mampiseho ireo sarin'i Larry Rosensweig sy ny voasoratra tanaty diary nandritra ny fotoana nandalovany tao Japana tamin'ny faramparan'ny taompolo 1960 sy ny fiandohan'ny taompolo 1970 ny bilaogy “Larry in Japan 40 Years Ago” na “Larry ao Japan 40 Taona Lasa izay” :
Larry Rosensweig no tale mpanorina ny Mozea Morikami sy ny Zaridaina Japoney ao Delray Beach, Florida. Hatramin'ny andro naha mpianatra nifanakalozana azy efapolo taona mahery izay, Noravahana mariboninahitra Masoandro Miposaka sy Tara-bolamena miaraka amin'ny Rosette ao Japana i Rosensweig noho ny fandraisany anjara tamin'ny fahatakarana ny kolontsaina Japoney teo amin'ireo Amerikana.
Nalaina nandritra ny fotoana nijanony tao Hiroshima tamin'ny fiandohan'ny taompolo 1970 ny sasany amin'ireo sary mandona indrindra an'i Larry. Tamin'ny lahatsoratra bilaogy iray, nizara andian-tsary misy ny fanorenam-ponenana tsy ara-dalàna na fari-bohitry ny mahantra niorina tao afovoan'ny tanàna taorian'ny fidarohana baomba atomika sy ny fiafaran'ny ady i Larry.
Fanazavana: “Ny zavatra hitako dia trano kely marobe tery loatra tsy mampino, feno fako tsy noraofina, lamba mihahy, bisikileta samihafa, kodiarantelo ary fiara simba.” ary avy amin'i Larry Rosenweig. Nahazoana alalana.
Afaka mijery sary betsaka misy an'i Hirsoshima, miaraka amin'ny fanehoan-kevitra ianao ato.
Tao amin'ny bilaoginy, nampiditra sombiny tamin'ny diary notehiriziny nandritra ny fotoana nijanonany tao Japana tamin'ny fiandohan'ny taona 1970 i Rosensweig. Tamin'ny lahatsoratra bilaogy mitondra ny lohateny hoe “Ny Androko Tamin'ny Niasa Tao Hiroshima,” mamaritra izany hoe miasa amin'ny birao Japoney tamin'ny andro talohan'ny nisian'ny solosaina izany izy:
Azonao jerena ato izany sary rehetra izany. Eto ambany kosa ianao mahita ny sary narakitr'i Rosensweig teny amin'ny tanàna amoron-dranomasina akaiky ny tanimbary voalamaka ao Shiroyone Senmaida malaza, ao amorontsiraka avaratra-andrefan'ny Saikinosy Noto:
Mampiseho votoaty isan-karazany tamin'ny fotoana nijanonany tao Japana ny bilaogin'i Larry, anisan'izany ny andro nahazoany fehikibo mainty tamin'ny judo, sy ny zavatra hitany tamin'ny fahazazana tao Hiroshima.2